Netherlands: Q/Midoobay oo Si kulul u Cambaareysay Heshiiska Cusub ee Qaxootiga – fogaanarag
Wakiilka gaar ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Xuquuqul insaanka Philip Alston ayaa si weyn u cambaareeyay heshiiska Dowladda Wadaaga ee Netherlands ay ka gaareen arrimaha Qaxootiga sharci laawayaasha ah ee ku dayacan dalka oo ah in la siiyo sariir ay habeenkii seexdaan subaxdii intay sii Quraacdaan ay ka baxaan.
Philip Alston oo ah sharciyaqaan dhinaca xuquuqda aadanaha ah muddo 20 sano ahna u soo shaqeynaayay Qaramada Midoobay ayaa Radio 1 News u sheegay in heshiiskaan uu dhaawacayo sumacadda Netherlands.
Haddii Netherlands ay doonayso in ay noqoto jasiirad ku taallo bartanka Yurub oo diidaysa in ay gudato waajibaadkeeda dhinaca xuquuqul insaanka waa in ay cadeysataa ayuu yiri waxa uuna intaasi ku daray oo yiri
Maxay u doonaysaa in ay sii ahaato hoyga maxkamadda caalamiga ah ee Adduunka ? maxay u doonaysaa in ay ka sii mid ahaato golaha amaanka ee qaramada midoobay? haddiiba aysan doonaynin in ay dhowrto fulisana waajibaadka ka saaran xuquuqda Aaadanaha ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Heshiiska ay gaareen xisbiyada wadaaga ee maamula dalka Netherlands ee arimaha magangelyodoonka la diiday codsiyadooda ayaa waxa uu qorayaa in shan xarumood oo hadda lagula tacaalo arimaha qoxootiga noocaas ah loo badelo xarumo si deg deg ah ugu jawaabo mashkilada ka taagan qaxootiga la diiday codsiyadooda.
Taas oo macnaheeda ay tahay in shanta magaalo ee ugu weyn dalka laga furo xarumo ay qoxootiga sharci laawayaasha ah ay joogaan muddo todobaadyo ah oo sharuud loogu dhigayo in ay dowladda kala shaqeeyaan qaabka dib loogu celinayo dalalkooda.
Haddii ay diidaana in dowladda ay kala shaqeeyaan dib u celintooda aanan loo ogolaan in ay ku noolaadaan xarumahaasi waxaase waliba u sii dheer in la joojiyo qarashka la siiyo gobboladda sida kumeelgaar ah ugu caawiya howga iyo nolol maalmeedka.
Waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah dadka diida in ay laabtaan loola dhaqmayo sida tuugada dambiilayaasha ah ee doonaya in ay dhacaan dadka Hollandeeska ah halkii la siin lahaa xaqa bani aadan ahaan ay mudan yihiin.
Philip Alston ayaa balan qaaday in arintaan uu hor geynayo gollaha amaanka si looga doodo in Netherlands ay gudanayso waajibka caalamiga ah ee ka saaran xuquuqul insaanka in ay cadeysato waxa ku dhaqmayso ayuu yiri.